ယူအေအီးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း & စီးပွားရေးဖွဲ့စည်းခြင်း
ယူအေအီးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး ကမ္ဘာကြီးကို၏ဤချမ်းသာကြွယ်ဝအစိတ်အပိုင်းအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းရှာဖှသေူခြင်းဖြင့်ဆည်းကပ်နေသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ယူအေအီးအလွန်ရေပန်းစားဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်မှတ်ပုံတင်ပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာသာယာဝပြောတဲ့ emerite ၏သတ်မှတ်ထားသောဧရိယာများတွင်နိုင်ငံခြားသားများအခွန်လွတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ အောက်ပါယူအေအီးနှင့်ဒေသတွင်း၌ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အပေါ်နောက်ခံသတင်းအချက်အလက်ပေးစွမ်းသည်။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (ယူအေအီး) 1971 ၌တည်ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ပေါ်တွင်အာရေဗျကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင်ဘုရင်စနစ်။ ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောအမည် "စော်ဘွား၏။ " ဆော်ဒီအာရေဗျတောင်ဘက်ပေါ်မှာနယ်စပ်။ အိုမန်အရှေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အီရန်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်ပေါ်မှာနယ်စပ်နှင့်ကာတာနိုင်ငံ။ အဆိုပါခန့်မှန်းလူဦးရေသာ 9.3 သန်းယူအေအီးနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြပြီး 1.5 သန်းနိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်ဘယ်မှာ 7.9 သန်းဖြစ်ပါတယ်။
ယူအေအီးရဲ့ဥပဒေစနစ်နှစ်ခုစံချိန်စံညွှန်းအောက်ပါအတိုင်း။ ပထမဦးစွာကအစ္စလာမ့်ရှရီအဟ်ဥပဒေအသုံးပြုသည်။ ဒုတိယအချက်မှာကအကောင်အထည်ဖော်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ, ဖက်ဒရယ်ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလူထုအခြေပြုကုဒ်သိရသည်။
1981 ၏ယူအေအီးကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အေဂျင်စီများဥပဒေယူအေအီးကော်ပိုရေးရှင်းထိန်းညှိ။ အဆိုပါအထုံးအဖွဲ့တို့ကိုတစ်ဦးအေးဂျင့်ယူအေအီးအတွက်အမြတ်အစွန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ကော်မရှင်များအတွက်ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများ, ရောင်းချဖြန့်ဖြူးပေးသို့မဟုတ်ပူဇော်ဖို့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကိုယ်စားပြုဘယ်မှာမဆိုသဘောတူညီချက်အဖြစ် "စီးပွားဖြစ်အေဂျင်စီ" define ။
• ကော်ပိုရိတ်သို့မဟုတ်ဝင်ငွေခွန်အခွန်အဘယ်သူမျှမ: ယူအေအီးကော်ပိုရေးရှင်းမှသာတိကျသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်; နိုင်ငံခြားဘဏ်များ, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်ကောက်ခံမှုမှကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ သို့သော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဝင်ငွေခွန်သူကိုတိုင်းပြည်များတွင်နေထိုင်သူတို့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
• Capital ကိုရဖို့အခွန်အဘယ်သူမျှမ: ယူအေအီးမြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်မပေးပါဘူး။ ဤသည်အထူးသဖြင့်ဒီအခွန်မှပုံမှန်အားဖြင့်ဘာသာရပ်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အခြားသူများအဘို့ကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်။
• ကျိုးကြောင်းဆီလျော် VAT သို့မဟုတ်အရောင်းအခွန်: ယူအေအီးသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော Value Added Tax (VAT) သို့မဟုတ်ရောင်းအားခွန်များရရှိခဲ့သည်။
• လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးဇုန်: ယူအေအီးအများအပြားရှိပါတယ် 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုကိုခွင့်ပြုနှင့်တစ်ဦးသုညအခွန်ကောက်ခံမှုအတွက်နိုင်သောလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးဇုန် စစ်အစိုးရ
• အင်္ဂလိပ်ကျယ်ပြန့်ကိုပြောဆိုသည်: အင်္ဂလိပ်ဒါရေပန်းစားသည်အခါယူအေအီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာပိုမိုလွယ်ကူသည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: ပညတ္တိကျမ်းထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ဘို့တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးနိမ့်ဆုံးအဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
• မဟာဗျူဟာမြောက်တည်နေရာ: ယူအေအီးကအခြားပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအနီးကပ် access point ပေးထားပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အခြားပင်လယ်ကွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကောင်စီ (GCC) နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ entry ကိုအမှတ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်း, အထူးသဖြင့်, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်မြောက်အာဖရိကများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒေသခံတစ်ဦးအချက်အချာဖြစ်ပါတယ်။
• စီးပွားရေးလုပ်နေတာ၏လွယ်ကူခြင်း: ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ "လွယ်ကူစီးပွားရေးပွုလုပျခွငျး၏" အစီရင်ခံစာယူအေအီး 31 အဆင့်st ကမ်ဘာပျေါတှငျနှင့်ပထမဦးဆုံးအရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်မြောက်အာဖရိကမှာ။
• ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားအင်အားစု: ယူအေအီးကျွမ်းကျင်လုပ်သားတစ်ဦးကြီးများလူဦးရေပေးထားပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့, ဒေသအဲဒီမှာထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်ခြင်းမဆိုကုမ္ပဏီများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလားအလာလုပ်သားအင်အားပေးနိုင်ပါသည်။
• နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှု: အားကြီးသောဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်နှင့်ယူအေအီးအတွက်လက်ရှိတည်ငြိမ်သောနိုင်ငံရေးစနစ်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ယူအေအီးရဲ့ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေနံသိုက်ကမ္ဘာလုံးပေါ်မှာအကြီးဆုံးဒသမအဖြစ်အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်။
ကုမ္ပဏီအမည်အားမှတ်ပုံတင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒူဘိုင်းဦးစီးဌာန (DED) ၏လိုင်စင်ပုဒ်မကနေပဏာမခွင့်ပြုချက်ရရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလိုအပ်သည်။ ဥပမာ, DED ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ဆောင်မှုများ, ကုန်သွယ်ရေးအမည်, နှင့်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားတွေကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယင်းနောက်အဆိုပါထည့်သွင်းအေဂျင်စီနာရရှိမှုစစ်ဆေးနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ကြိုတင်ယူထားတိုင်အောင်, ကြိုတင်ယူထားငွေပေးချေမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် နာမတျောကို အဆိုပါ DED ရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်မှာအွန်လိုင်း။
နိမ့်ဆုံးမြို့တော်လိုအပ်ချက်များကိုအာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုကနေအာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့် (အဘူဒါဘီသာ AED300,000 လိုအပ်ပါတယ်စဉ်ဥပမာဒူဘိုင်း, AED 150,000 ဖြစ်ပါတယ်) အားခြားနားသည်။
ယူအေအီးကော်ပိုရေးရှင်းမှသာသူတို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရေနံနှင့်ဓါတ်ငွေ့တစ်ခုသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားဘဏ်လျှင်ဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ ဒါ့အပြင်အဘယ်သူမျှမမြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်လည်းမရှိ။
တိုက်ရိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခွန်ယူအေအီးအတွက်မတည်ရှိပါဘူး။ သို့သော်အများဆုံးစော်ဘွားအမျိုးမျိုးသောအခကြေးငွေမှတဆင့်စည်ပင်သာယာအခွန်, ဒါမှမဟုတ်အခွန်ကောက်ခံလုပ်ပါ။
ယူအေအီးကော်ပိုရေးရှင်း AED 2,000 ၏နှစ်ပတ်လည်သက်တမ်းတိုးကြေးပေးဆောင်ဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
ယူအေအီးကော်ပိုရေးရှင်းတိုးမြှင့် privacy ကိုများအတွက်ဆန်ခါတင်ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များကိုသုံးပါနိုင်ကြသည်။
တ Securities and Commodities အာဏာပိုင်နှင့်အတူနှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များထုတ်ပြန်ချက်များ file ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအေဂျင်စီကသူတို့ရဲ့ website သို့ပေါ်ဤအကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်များထုတ်ဝေသည်။
တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းပူးတွဲစတော့ရှယ်ယာတစ်ခုသို့မဟုတ်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုလျှင်စာရင်းစစ်အဖြစ်ခန့်အပ်ထားရပါမည်။ (ရှိလျှင်) ယူအေအီးကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့အစည်းများ, အလှည့်၌, စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အတူ၎င်းတို့၏စာရင်းစစ်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များ file များနှင့်၎င်းတို့၏ကုန်သွယ်ရေးလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရှိရမည်။
ယူအေအီးအဖြစ်ဝေးစာရင်းစစ်များ၏ချိန်းစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်သကဲ့သို့မည်သည့်ချွင်းချက်အဘို့ခွင့်ပြုမထားဘူး, မကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ သို့သော် Big လေးစာရင်းစစ်ကုမ္ပဏီတွေထဲကတစ်ခုအခြို့သောကော်ပိုရေးရှင်း, အထူးသဖြင့်ဘဏ်များ audit ရမည်ဖြစ်သည်။
ကော်ပိုရေးရှင်းနှစ်ပတ်လည်အကောင့်များကို ပြင်ဆင်. ရမည်နှင့်ဘဏ်များဟာသူတို့ရဲ့အကောင့်များကို ပြင်ဆင်. နှင့်ယူအေအီးဗဟိုဘဏ်၏လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာရမည်။
အားလုံးစာရင်းကော်ပိုရေးရှင်းသုံးလတစ်ကြိမ်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပေါ်ဤအကြောင်းနှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်ချက်များထုတ်ပြန်သော Securities and Commodities အာဏာပိုင်နှင့်အတူအင်္ဂလိပ်နှင့်အာရဗီဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းစာရင်းစစ်ဆေးနှစ်ဦးစလုံး file ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးကယူအေအီးကော်ပိုရေးရှင်းအနေနဲ့နှစ်စဉ်ယေဘုယျအစည်းအဝေးရှိရမည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဤအခြေခံမူယူအေအီးတွင်ဤအစည်းအဝေးများကျင်းပရန်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ အဆိုပါပါတီများဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာယူအေအီးကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်အစည်းအဝေးများကျင်းပရန်နိုင်ပါတယ်။
8 ရက်ပေါင်း - ယူအေအီးကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကို 20 ထံမှယူမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးစီးအချိန်လျှောက်ထားမှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများပြီးဆုံးဘယ်လိုတိကျစွာ, ခွင့်ပြုချက်အပေါ်ကော်ပိုရိတ်နာမကိုအမှီမူတည်အဖြစ်။
ယူအေအီးကော်ပိုရေးရှင်းများတွင်အကျိုးခံစားခွင့်များစွာရှိသည် - ကော်ပိုရေးရှင်း၊ ဝင်ငွေ၊ အမြတ်ခွန်မများ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ ယူအေအီးသည် VAT အခွန်ကောက်ခံသည်။ ထို့အပြင်အင်္ဂလိပ်ကိုကျယ်ပြန့်စွာပြောဆိုကြသည်။ ထို့အပြင်လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးဇုန်များကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ယူအေအီးကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများနှင့်မြောက်အာဖရိကဒေသများသို့မဟာဗျူဟာကျကျဝင်ရောက်ခွင့်တစ်ခုပေးသည်။ ယူအေအီးသည်နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှု၊ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး တည်းသာပါဝင်ရန်ကမ်းလှမ်းသည်။